Tipu Sultan, मैसूर को टाइगर
20 नोभेम्बर, 1750 मा, मैसूर राज्यका सैन्य अधिकारी हाइड अली र उनको पत्नी, फतिमा फख्र-एन-निसाले बंगलादेशमा नयाँ बच्चाको स्वागत गरे। तिनीहरूले उहाँलाई नाउँ फत अली नाम दिएका थिए तर उनी टिपु सुल्तानलाई स्थानीय मुस्लिम संत, टीपू मास्टन अुलिया भनिन्।
हाइडर अली एक सक्षम सैनिक थियो र 1758 मा मराठस को आक्रमणकारी सेना को विरुद्ध यस्तो पूर्ण विजय हासिल गरे कि मैसूर को मार्थान घरों को अवशोषित गर्न सक्षम थियो।
नतिजाको रूपमा, हाइइड अली म्यासेजको सेनाको कमांडर-इन-प्रमुख बनेको, पछि सुल्तान , र 1761 सम्म राज्यको निर्दोष शासक।
तिनको बुबाले प्रसिद्धि र प्रवृति गुमाए तापनि, युवा टिपू सुल्तानले सर्वोत्तम शिक्षकहरू उपलब्ध गराउन शिक्षा पाएका थिए। उनले यस्ता विषयहरू सवारी, स्वर्गीयशक्ति, शूटिंग, कुरानिक अध्ययन, इस्लामिक न्यायशास्त्र, र उर्दू, पर्शियन् र अरबी जस्ता भाषाहरू अध्ययन गरे। टीपू सुल्तानले पनि प्रारम्भिक उमेरका फ्रान्सेली अफिसरहरूको सैन्य रणनीति र रणनीतिहरूको अध्ययन गरे, किनकि उनको बुबा दक्षिण कोरियामा फ्रांसीसीसँग सम्बद्ध भएको थियो।
1766 मा, जब तिपू सुल्तानले 15 वर्षको उमेरमा उनी पहिलो पटक युद्धमा आफ्नो सैन्य प्रशिक्षण लाग्ने मौका पाएका थिए, जब उनले आफ्नो बाबु संग्राबार मा आक्रमण गरे। जवानले दुई देखि तीन हजारको बलको चार्ज लिनुभयो र चतुर्थपूर्वक मालाबारका मुख्यमन्त्रीको परिवारलाई पक्राउ गर्न सफल भए, जसले भारी गार्ड अन्तर्गत एक किल्लामा शरण लिन थाले।
उनको परिवारको लागि डरलाग्दो, आत्मसमर्पण गरियो र अन्य स्थानीय नेताहरूले उनको चाँडै पछ्याए।
हाइडर अली आफ्नो छोराको गर्व गर्व थियो कि उनले उसलाई 500 कोलाहरु को आदेश दिए र उसलाई मैसूर भित्र पांच जिलों को शासन गरे। यो युवकको लागि एक सुन्दर सैन्य करियरको सुरुवात थियो।
पहिलो Anglo-Mys युद्ध
मध्यौंवीं शताब्दीको दौडान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनीले दक्षिणी भारतको नियन्त्रणलाई स्थानीय राज्यहरू र राजकुमारहरू एकअर्कालाई र फ्रान्सेलीको खेल गरेर खेल्न खोजे।
1767 मा, ब्रिटिश ने निजाम र मराठस संग एक गठबंधन बनाए, र एक साथ उनि मैसूर मा हमला गरे। हाइडर अली मराठस संग एक अलग शान्ति बनाउन सफल भए, र त्यसपछि जुन जून मा निमम संग बातचीत गर्न 17 वर्षीय छोरा छोरा टिपू सुल्तान पठाइयो। जवान राजनयिक निजाम शिविरमा नगद, गहना, दस घोडाहरू र पाँच जना प्रशिक्षित हत्यारा समेत उपहार सहित आए। एक हफ्ते मा, टिपूले स्विचन पक्षमा निजाम को शासकलाई मन पराउनुभयो र ब्रिटिश विरुद्ध म्यासेजियन युद्धमा सामेल हुनुभयो।
टिपू सुल्तानले मद्रास (अहिले चेन्नई) मा एक गोठालो आक्रमण गरे, तर तिनको बुबाले तिरुवन्नमल्याईमा ब्रिटिशले पराजित गरे र उनको छोरालाई फिर्ता पुर्याउन थाल्नुभयो। हाइडर अली मानसूनको वर्षाको समयमा लड्न जारी राख्न असामान्य कदम चाल्नु भयो, र टिपूले दुई ब्रिटिश किरणहरू कब्जा गरे। बेलायती सेनाले आइपुग्यो जब म्यासोरेन सेना एक तेस्रो किल्ला घटेको थियो; Tipu र उनको गोलाकारले हाइड अलीका सेनाहरूलाई राम्रो क्रममा हटाउन अनुमति दिन ब्रिटिश लामो समय सम्म रोकियो।
हाइडर अली र टिपु सुल्तान त्यसपछि तराईको किनारमा घुम्दै गए, किट्टीहरू र ब्रिटिश-आयोजित शहरहरूमा समाते। म्यासेोरियन ब्रिटिशहरूले मद्रासका प्रमुख पूर्वी किनाराबाट पोर्ट विलुप्त गर्न धम्की दिएका बेला बेलायतले 1769 को मार्चमा शान्तिको लागि सहयोग गरे।
यस अपमानजनक परास्त पछि ब्रिटिशले हाइड अलीसँग 1769 शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो जसलाई मद्रास संधि भनिन्छ। दुबै पक्षले आफ्नो पूर्व-युद्ध सीमामा फर्कन र कुनै अन्य शक्तिद्वारा आक्रमणको सन्दर्भमा एकअर्कालाई सहायता गर्न सहमत भए। परिस्थितिमा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी सजिलो छ, तर अझै पनि, यो सम्झौता सर्तहरूको सम्मान गर्नुहुन्न।
1771 मा, मराठसले मैसूरलाई सेनाको साथमा 30,000 पुरुषको रूपमा आक्रमण गरे। हाइड अली मद्रास संधि को तहत सहायता को आफ्नो कर्तव्य को सम्मान को लागि ब्रिटिश मा बुलाया, तर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ले उनको सहयोग को लागि कुनै पनि सैनिक पठाने ​​देखि इनकार गरे। टिपू सुल्तानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए जब मैसूरले मराठमा युद्ध गरे, तर जवान कमान्डर र तिनका बुबाले फेरि फेरि बेलायतमा भरोसा गरेनन्।
त्यस दशक पछि, ब्रिटेन र फ्रान्सले सन् 1983 मा बेलायतको उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशहरूमा विद्रोह गरे। फ्रान्स, निस्सन्देह, विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरे।
पुन: प्राप्तिमा, र अमेरिकाबाट फ्रांसीसी समर्थन छोड्न, ब्रिटेनले फ्रांसीसीलाई पूर्णतया भारतबाट बाहिर पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। यो 1778 मा दक्षिण अफ्रिकामा पाण्डिचेरी, जस्तै भारतमा प्रमुख फ्रान्सेली होल्डिङहरू खिच्न थाल्नुभयो। अर्को वर्ष, ब्रिटिशले म्यासेरन तटमा फ्रांसीसी कब्जा गरेको बंदरगाह माही पक्राए, र हाइडर अलीलाई युद्ध घोषणा गर्यो।
दोस्रो Anglo-Mys युद्ध
दोस्रो एंग्लो-मैसूर युद्ध (1780-1784), जब हिर अली कर्नाटिकमाथि आक्रमण भएको909को सेनाको नेतृत्व गरे, जुन बेला बेलायतको साथ थियो। मद्रास मा ब्रिटिश राज्यपाल म्यासेर्सन्स विरुद्ध सर हेकेक्टर मुनरोको बिरुद्ध उनको सेनाको बल्क पठायो र यसलाई गुन्नु छोड्न र मुख्य बल संग भेट्न कोर्सेल विलियम बेली को अन्तर्गत एक दोस्रो ब्रिटिश सेना भनिन्छ। हाइडरले यो शब्द पाएका थिए र टोपी सुल्तानले बेलीलाई इन्टरनेसन गर्न 10,000 सेनाको साथ पठाए।
सेप्टेम्बर 1780 मा, टिपु र तिनका 10,000 गोलाकार र शिशुले बाईलीको संयुक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी र भारतीय सेनालाई घेरिएको थियो, र उनीहरूमाथि ब्रिटिश भारतको सामना गर्नु पर्ने सबैभन्दा खराब हारको सामना गरे। अधिकांश 4,000 एंग्लो-भारतीय सेनाले आत्मसमर्पण गरेका थिए र कैदी लगाइएको थियो। 336 मारिएको थियो। कर्नल मुनरोले बेइलीको सहायतालाई मार्च गर्न अस्वीकार गरे, ती भारी बन्दुकहरू र अन्य सामग्रीलाई भण्डारण गरेको डरको डरले। अन्ततः उनले अन्तर्वार्ता गरे, यो धेरै ढिलो थियो।
हाइडर अलीले कसरी ब्रिटिश सेनालाई बेवास्ता गरे जस्तो महसुस गरेन। त्यो समयमा मद्रास आफैले आक्रमण गरिसकेपछि उनले सम्भवतः ब्रिटिश आधार लिन सक्थे। तथापि, उनले ट्युन सुल्तानलाई मात्र पठाउँथे र केही घुमाउन मुनरोको फिर्ता लिने स्तम्भहरूलाई दबाब दिन; म्यासोरेन्सले सबै ब्रिटिश स्टोर र सामानहरू कब्जा गरे र 500 जना सैनिकलाई मारेका थिए वा घाइते भएका थिए तर मद्रासलाई पराजित गर्न प्रयास गरेनन्।
दोस्रो Anglo-Mys युद्ध घेराबन्दीको श्रृंखलामा बस्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण घटना टुंगोको फेब्रुअरी 18, 1782 ईस्ट इंडिया कम्पनीका सेनाका सेनाले तनजोरमा कर्नल ब्राथ्वाइटलाई पराजित गर्यो। जब तिरुू र उनको फ्रान्सेली सहयोगी लिले ब्रेथिवाईटलाई पूर्णतया आश्चर्यचकित भएको थियो र ती बीसौं घन्टाको युद्ध पछि ब्रिटिश र उनका भारतीय सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गरे। पछि ब्रिटिश प्रान्तले भन्नुभयो कि फ्रान्सेलीले हस्तक्षेप गरेन भने तिरुूले उनीहरूलाई सबैको हत्या गरेका थिए, तर यो लगभग निश्चित रूपमा गलत छ - उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे पछि कुनै कम्पनीको सेनालाई हानि गरेनन्।
Tipu ले सिंहासन ल्याउँछ
जबकि दोस्रो एङ्ग्लो-मैसूर युद्ध अझै पनि घृणा भएको थियो, 60 वर्षीय हाइडर अलीले गम्भीर कारबाबुको विकास गर्यो। 1782 को पतन र प्रारम्भिक जाडोको अवधिमा उनको अवस्था बिग्रियो, र डिसेम्बर7मा उनको मृत्यु भयो। टिपु सुल्तानले सुल्तानको शीर्षकलाई ग्रहण गरे र29 डिसेम्बर, 1782 मा आफ्नो बुबाको सिंहासनमा लिए।
ब्रिटिशले आशा गरे कि शक्तिको यो संक्रमण शान्तिपूर्ण भन्दा कम हुनेछ, ताकि तिनीहरू चलिरहेको युद्धमा फाइदा पाउनेछ। तथापि, सेना द्वारा तुिपूको तत्काल स्वीकृति, र सुचारु संक्रमणले तिनीहरूलाई रोक्न सकेन। यसको अतिरिक्त, असुरक्षित ब्रिटिश अधिकारीहरूले फसलको समयमा पर्याप्त चावल सुरक्षित गर्न सकेनन्, र उनीहरूका केही सार्थकहरूले साँच्चै मृत्युको बिरोध गरेका थिए। मानसूनको उचाईको अवधिमा नयाँ सभापति विरुद्ध आक्रमण सुरु गर्न उनीहरूलाई कुनै शर्त थिएन।
दोस्रो एङ्ग्लो-मैसूर युद्ध 1784 सम्मको समयसम्म चलेको थियो, तर टिपु सुल्तानले माथिल्लो चोटि माथिल्लो चोटि माथिल्लो हात बनाए।
अन्ततः, 11 मार्च, 1784 मा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनीले औपचारिक रूपले म्याङ्गलोरको संधिमा हस्ताक्षर गरे।
संधिको सर्तहरूमा, दुई पक्षहरू फेरि एकचोटी क्षेत्रको सन्दर्भमा स्थिति कोइराला फर्किन्छन्। Tipu सुल्तानले कब्जा गरेको युद्धको सबै ब्रिटिश र भारतीय कैदीहरूलाई रिहा गर्न सहमत भए।
तिब्बत राजा शासक
बेलायतमा दुईवटा विजयहरूको बावजूद, तिपू सुल्तानले यो एहसास गर्यो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनीले आफ्नो स्वतन्त्र राज्यलाई गम्भीर खतरा बनायो। उहाँले प्रसिद्ध सैन्य अग्रिमको वित्त पोषण सहित, प्रसिद्ध मैसूर रकेटका अन्य विकास सहित - फलामका ट्यूबहरू जुन दुई किलोमिटर सम्म मिसाइलहरू पुग्न, ब्रिटिश सेना र तिनका सहयोगीहरूलाई भयानक बनाउन सक्छ।
Tipu पनि सडक निर्माण गरेको छ, कोणको नयाँ रूप सिर्जना गर्यो, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि रेशम उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिईयो। उहाँ विशेष गरी मोहोरिएको थियो र नयाँ प्रविधिहरूसँग प्रसन्न हुनुभयो, र सधैँ विज्ञान र गणितको एक एड्स विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। एक भक्त मुस्लिम, टिपु उनको बहुमत-हिन्दू विषयहरूको विश्वासको सहनशीलता थियो। योद्धा राजाको रूपमा नामकरण गरियो, "म्यार्सको टाइगर," टुप्तु सुल्तानले सापेक्ष शान्तिको समयमा एक सक्षम शासकलाई पनि साबित गर्यो।
तेस्रो एङ्ग्लो-मैसूर युद्ध
Tipu सुल्तानले तेस्रो पटक 1790 र 1792 को बेला बेलायतको सामना गर्नुपरेको थियो। यस समय, मैसूर यसको सामान्य सहयोगी, फ्रान्स, जुन फ्रांसीसी क्रांतिको थियो । ब्रिटिश यस अवसर मा भगवान कर्नेलसेल द्वारा नेतृत्व को नेतृत्व मा अमेरिकी क्रांति को समयमा ब्रिटिश कमांडरों मध्ये एक को रूप मा पनि प्रसिद्ध थिए।
दुर्भाग्यवश टिपू सुल्तान र तिनका जनहरूको लागि, ब्रिटिशले दक्षिणी भारतमा लगानी गर्न बढी ध्यान र स्रोत राखेका थिए। यद्यपि युद्ध धेरै वर्षसम्म पुग्यो, अघिल्लो सङ्गठनको विपरीत, ब्रिटिशले उनीहरुलाई भन्दा अधिक स्थान हासिल गरे। युद्धको अन्त्यमा, बेलायती टिपुको राजधानी शहर सेइनापाटममा बसोबास गरेपछि मास्कोर नेताले कैपिट्युलेट गर्न थाल्नुभयो।
Seringapatam को संधि 1793 मा, ब्रिटिश र उनको सहयोगी, मराठा साम्राज्य, मैसूर को आधा भाग ले लिया। हिन्दुले पनि सोध्नुभयो कि Tipu आफ्नो दुई छोराहरू, दुई वर्ष र ग्यारह वर्षको उमेरमा घुम्न थालेका छन्, यसका लागि ईजरायण शासकले युद्ध क्षतिपूर्ति दिएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न। कर्नेलसेलले केटाकेटीलाई कैदीलाई पक्राउ गरे कि उनको पिताले संधिको नियम पालन गर्दछन्। Tipu चाँडै छुडौती तिर्नुभयो र आफ्ना छोराछोरीलाई बरामद गर्नुभयो। यद्यपि, मैसूर को टाइगर को लागि यो एक चौंकाने वाला उलटी थियो।
चौथो एङ्ग्लो-मैसूर युद्ध
1798 मा, नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक फ्रांसीसी जनरलले मिश्रलाई आक्रमण गरे। पेरिसमा क्रांतिकारी सरकारमा आफ्नो शासकहरूलाई अनबेकन्दो, बोनपार्टले मिस्रलाई एक कदम-तहको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनायो जुनबाट भारत (मध्य पूर्व, फारस र अफगानिस्तानको माध्यमबाट) आक्रमण गर्न, र यसलाई ब्रिटिशबाट पराजित गर्यो। यो कुरामा ध्यान राख्ने, सम्राट हुने व्यक्ति टिपू सुल्तानसँगको गठबन्धन खोज्दै, दक्षिणी भारतको बेला बेलायतको बेलायतको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन।
तथापि, यस गठबन्धनको कारण हुन सकेनन्। नेपोलियनको आक्रमण मिश्रको सैन्य आपदा थियो। दुःखको कुरा, तिनको सहयोगी सहयोगी, टुप्पा सुल्तानले पनि भयानक हारको सामना गरे।
1799 सम्म, बेलायतले तेस्रो एङ्ग्लो-मैसूर युद्धबाट पुनः प्राप्त गर्न पर्याप्त समय पाएको थियो। उनी मद्रास मा ब्रिटिश सेनाको एक नयाँ कमांडर थिए, रिचर्ड वेल्सले, अर्लिंगटनका अर्ल, जसले "आक्रामकता र अघोषितताको नीति" गरे। यद्यपि ब्रिटिशले आफ्नो देशको आधा भाग र ठूलो रकम कमाएको थियो, टिपु सुल्तानले यस बीचमा पुनर्निर्माण गरेको थियो र मैसूर एकपटक एक समृद्ध ठाउँ थियो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी जान्दथे कि मैसूर यो र भारतको कुल प्रचलन बीच मात्र एकमात्र चीज थियो।
लगभग 50,000 सेनाको ब्रिटिश नेतृत्व गरिएको गठित टिपू सुल्तानको राजधानी सिटी सेिंगापतममा 1799 को फेब्रुअरीमा भएको थियो। यो युरोपेली अफ्रिकाको मुठभेडको एक औपनिवेशिक औपनिवेशिक सेना थियो र बिरामी-प्रशिक्षित स्थानीय भर्तीको खपत थियो। यो सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनीको क्लाइन्ट स्टेटका सबै भन्दा राम्रो र उज्यालो बनाइएको थियो। यसको एक लक्ष्य म्यासूर को विनाश थियो।
यद्यपि ब्रिटिसले विशाल पिनचर आन्दोलनमा म्यासेज राज्यको संलग्नता खोजे तापनि टोपू सुल्तानले साढे 12 बजेदेखि अचम्मको आक्रमण गर्न थालेका छन् र उनीहरूले विद्रोह गर्नुअघि लगभग एक ब्रिटिश साम्राज्यवादलाई पराजित गरे। वसन्तभरि, बेलायतले म्यासेजन राजधानीको नजिक र नजिक थिई। टिपूले शान्तिको व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्दै ब्रिटिश कमान्डर वेल्ससेले लेखे, तर वेल्सले जानबूझेर पूर्ण रूपमा स्वीकार्य शर्तहरू प्रदान गरे। उनको मिशन टिपू सुल्तानलाई नष्ट गर्न थालेको थियो, उहाँसँग कुराकानी गर्न नसक्ने थियो।
मई, 17 999 को सुरुमा, ब्रिटिश र तिनका सहयोगीहरूले मैसूर को राजधानी सेरिङ्गापतमलाई घेरा लगाए। टिपू सुल्तानले 30,000 आक्रमणकारीहरूसँग 50,000 आक्रमणकारीहरूसँग मिले।4मईमा ब्रिटिशहरूले शहरी पर्खालहरू भत्काइदिए। टिपु सुल्तानले हत्यारोमा ल्यायो र तिनको शहरलाई बचाएको थियो। युद्ध पछि, उनको शरीर रक्षक को ढेर को तल पत्ता लगाइएको थियो। सेरिङ्गापतम ओभरराइड भएको थियो।
Tipu Sultan's Legacy
Tipu सुल्तानको मृत्यु संग, मैसूर ब्रिटिश राजको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत एक रमाइलो राज्य भयो। तिनका छोराहरू निर्वासनमा पठाइएको थियो, र एक फरक परिवार म्यासूर को ब्रिटिश शासन अन्तर्गत गुप्तचर शासक बनिन्। वास्तवमा, Tipu सुल्तान को परिवार एक जानबूझकर नीति को रूप मा गरीबी को कम गर्यो र केवल 2009मा प्रिंसिपल स्थिति को पुनर्स्थापित गरियो।
टिपु सुल्तानले लामो र कडा संघर्ष गरे, यद्यपि अन्ततः उनको देशको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न असफल भयो। आज, Tipu धेरै भारत द्वारा र पाकिस्तान मा पनि नायक स्वतन्त्र लड़ाकू को रूपमा सम्झना गरिन्छ।
> "ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो डर: टिपू सुल्तान," नेशनल आर्मी संग्रहालय , फेब्रुअरी 2013।
> कार्टर, मिया र बारबरा हार्लो। साम्राज्य को अभिलेखागार: खंड I. सुउज नहर , Durham, NC को लागि ईस्ट इंडिया कम्पनी देखि : ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003।
> "पहिलो एंग्लो-मैसूर युद्ध (1767-176 9)," जीकेबीसी, 15 जुलाई, 2012।
> हसन, मोबिलबिल। टिपू सुल्तान को इतिहास , दिल्ली: एकर किताब, 2005।
फ्रांसीसी क्रांति समय-समय: 1789 -91
जापानको सम्राट होरोहोटो
उस्शा: आतंकवाद र युद्ध अपराधीहरू
क्रांतिकारी अपोलोनियर मिबिनी
Sukarno, इंडोनेशियाको पहिलो राष्ट्रपति
तपाईं संग कुनै पनि असुरक्षित व्यक्तिहरु लाई समस्या छैन
एल्विस प्रेस्ली टाइमलाइन: 1954
कसरी अमेरिकाको विदेशी सहायता विदेशी नीतिमा प्रयोग गरिन्छ
विल्सन नामको अर्थ र उत्पत्ति
स्पेनी एडवरब्सको परिचय
तपाईंको आत्मा साथीको लागि उपहार सुझावहरू
एक एम्पाथले हिमालयन क्षमताहरू हटाउँदछ
18 मजेदार पप संस्कृति-प्रेरित समूह हेलोवीन पोशाकहरू
पैदल ह्याङ्: यो के हो र के यो यो एक कटरको बारेमा के भन्छ
अबीगेल र डेभीड - अबीगेल राजा दाऊदको विजेता पत्नी थिए
माउंटेन बायोमोज्स: जीवनमा उच्च ऊंचाई
अमेरिकी गृहयुद्ध: हिमालटन सडकहरूको युद्ध
के परमेश्वरहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ?
Aesop को जीवन
Nokian eNTYRE टायरको समीक्षा
5 क्यूब्स को रूप मा क्यूबन, पेरोल एन फ्रेंटर र Ley डी Ajuste
सिख बेबी नामहरू एलसँग सुरु हुँदै
वैज्ञानिक विधि प्रवाह चार्ट
के हामी सुतिरहेका मकवानहरूलाई निको पार्छौं?
डेभीड लेटरम्यानमा शीर्ष5पुनरावर्ती खण्डहरू